Ahoana ny fomba hanampiana fanampiana ara-potoana amin'ny kalandrie? | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | iOS 7, Fampianarana sy torolàlana
Tao anatin'izay herinandro lasa izay, ao amin'ny Actualidad iPad dia mampianatra zavatra maro mifandraika amin'ny iOS 7 isika, izany hoe, mamorona fampianarana manokana izahay mba tsy ho very ny mpampiasa rehetra amin'ity kinova iOS vaovao navoakan'i Apple vao tsy ela ity. Betsaka ny fiasa vaovao ao amin'ny rafitra fiasa, fa maro amin'izy ireo no maivana sy miverimberina noho izany, ao amin'ny Actualidad iPad dia mifantoka amin'ny olona samihafa mampiasa iPad avy amin'ny ankizy iray izay te hianatra misintona fampiharana amin'ny olon-dehibe iray ianao. mety te hahafantatra ny fomba famerana ny fidirana amin'ny Internet amin'ny iDevice-nao.
Androany aho hiresaka momba ny fomba hanampiana fanampiana isan'ora amin'ny fanendrena amin'ny kalandrie iDevice. Andao haka ohatra iray: handeha ho any Etazonia aho satria manana fivoriambe asa ary nanampy zavatra maro tokony hatao ao amin'ny kalandrie iPad miaraka amin'ny ora misy azy ireo. Saingy mazava ho azy, ho any Espana ny fotoana noho izany dia mila manampy fanampiana ara-potoana aho. Ity fisehoan-javatra vaovao ity dia hisoroka ny fikorontanana: Raha apetrako ny faritry ny fotoana amerikanina, ny fanendrena rehetra napetrako tao amin'ny kalandrie dia hovaina amin'ny fotoan'ny Etazonia.
Manampy faritry ny fotoana amin'ny kalandrie
Araka ny efa nolazaiko taminareo, ny fanampiana ny faritra dia ho an'ity manaraka ity:
Raha manampy fanohanana ny zotram-potoana amin'ny iPad izahay dia hampiseho amintsika hatrany ny daty sy ora nitrangan'ny hetsika tao amin'ny faritra voafantina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha misafidy ny faritry ny fotoana any Beijing aho dia hovaina vonjimaika ny faritry ny ora ao Beijing ny faritany rehetra ao amin'ny tetiandroko.
Mandehana any amin'ny Settings an'ny terminal anao ary tadiavo ny safidy: «Mail, fifandraisana, kalandrie«
Rehefa tafiditra ao amin'io faritra io ianao, dia tadiavo ny teny «kalandrie»Ary ao anatin'ny safidy rehetra dia ampidiro ilay mametraka hoe:«Fanohanana ny faritra«
Raha atao default dia tapaka io asa io, koa raha te hampavitrika azy ianao dia ampandehano ny safidy: "Support zone zone"
Rehefa alefa dia mandehana mankany «Faritra ora»Ary safidio ny toerana tianao hanovana ny ora amin'ny kalandrie.
Ary raha miditra amin'ny kalandrie ianao dia niova ny ora ka hanampy anao hifantoka amin'ny asanao any amin'ny firenena voafantina. Mahasoa anao ve izany?
Fanazavana fanampiny - Torolàlana Quickoffice: Mamorona rakitra an-tsoratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ahoana ny fomba hanampiana fanampiana ara-potoana amin'ny kalandrie?
Salama maraina: amin'ity zoma ity dia hankany Etazonia aho; Manana ny datin'ny kalandrie sy ny ora fisakafoanana ary ny fitsidihako tsangambato. Efa vitako izay voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity fa izao dia hitako fa raha tamin'ny 15:9 tolakandro ny sakafo ary izao dia milaza fa amin'ny XNUMX:XNUMX maraina ... inona no tsy nety nataoko? Sa tokony hampavitrika ihany rehefa efa ao amin'io fe-potoana io?
Ny ataon'ity fanohanana amin'ny fotoana ity dia mamadika ny fotoana voatondro ho amin'ny fotoanan'ny firenena voafidy. Ohatra, raha any Espana aho ary manana fivoriana amin'ny 19:00 hariva (ora Espaniôla) rehefa mampihetsika ilay fiasa, dia hasehoko ahy fa tsy amin'ny 19:00 alina dia amin'ny 10:00 maraina no misy ao Etazonia. Ny fanjakana dia misy fahasamihafana 9 ora.
Mpanonta vaovao IPad
Dia aleoko tsy manao an'io satria efa mandeha amin'ny ora voatondro aho; raha manova azy ireo aho, inona no mahasosotra 😉
Ahoana ny famerana ny fidirana amin'ny Internet amin'ny iPad, iPhone ary solosainao